ကလိုစေးထူး: မြန်မာပြည် လျှို့ဝှက်စစ်ပွဲ
ဒီဗွီဒီယို ရုပ်သံ မှတ်တမ်းလေးကို ကျနော်တင်ချင်နေတာ နော်ဝေ ဒီဗွီဘီမှာ တင်ထားတာကို ကြည့်ပြီး ကတည်းကပါ။
အီဗန်ဝီလျံ ရိုက်ကူး တင်ဆက်တဲ့ မြန်မာပြည် လျှို့ဝှက်စစ်ပွဲဆိုတဲ့ အဲဒီ ရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာ ကျနော် စိတ်အထိခိုက်ရဆုံး နေရာကတော့ `ကျနော့်သားလေးက ကျနော့်အတွက် လက်တဖက် ချန်ပေးသွားတယ်ဗျာ´လို့ စိတ်ထိခိုက်စွာနဲ့ ပြောနေတဲ့ ကရင် အမျိုးသားကြီးရဲ့ စကားပါ။
၄၈ မိနစ်ကြာ တင်ဆက်တဲ့ ဒီမှတ်တမ်းမှာ ဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်းရဲ့ သတ္တိကိုလဲ လေးစားမိပါတယ်။ ခံစား ကြည့်ရှုကြည့်ပါ ခင်ဗျာ။
Posted by ကလိုစေးထူး at 3:54 PM
ကွန်နက်ရှင် မကောင်းလို့ ကြည့်လို့မရသေးဘူး။ တပိုင်းတစပဲ ကြည့်လို့ရတယ်။ ကွန်နက်ရှင် ကောင်းမှပဲ သေချာကြည့်တော့မယ်။
Feb 4, 2007, 5:07:00 AM
I've been trying to find it back since I last watched it on Channel4TV, UK. I even cried while I was watching that documentary. I think all of the Burmese should watch it to see what's really happening in our country.
Apr 6, 2007, 1:32:00 PM
Apr 6, 2007, 1:33:00 PM